Iifonti ezi-8 zoyilo lweWebhu awunakuphosa ekuqokeleleni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti zasimahla zeWebhu eziyi-8
Ukuba ungomnye wabo basebenzise kwiifayile zabo kumaphepha ewebhu I-Verdana, iArial okanye iTahoma, ukusuka apha sicebisa ukuba ubambe kwaye uyazi ukuba ngoku ungasebenzisa nayiphi na ifonti kuyilo lwakho.
Kuba iFonti kaGoogle yenze ikhathalogu ebanzi ye iifonti zasimahla esinokuyisebenzisa kwindawo yethu kunye nokwazisa okulula kwekhowudi, ukusebenzisa enye yeentlobo "ezingagqibekanga" kubonakala ngathi zenza iphepha liphulukane nobuhle balo. Nazi iifonti ezisi-8 ze uyilo lwewebhu ukuze oku kungenzeki kwaye uyazi ukuba yeyiphi ifonti onokuyisebenzisa kwiprojekthi yakho yedijithali elandelayo.
Iifonti eziyi-8 zewebhu uyilo lwakho
Apha ngezantsi uyakufumana kwezona fom zinokuqonda nezicace gca kwezona zihonjisiweyo. Ukuba awuyifumani into obuyikhangela, ndincoma ukuba ujonge iposti yethu Saga 5 Iifonti zasimahla.
Ifonti yeqanda nguVivien BertinUkwakhiwa kwetypography kuye kwasekelwa kwinani lejiyometri le-oval (kungoko igama layo, iqanda). Iyafundeka kakhulu, ilungele iitekisi ezinde kwiwebhu.
ISkarpaLT, ebhalwe nguAgaSilvaUkusetyenziselwa urhwebo umbhali usicela ukuba senze umnikelo. Andiluthandi uphawu lwe-euro.
Ukuthanda ingxabano, ngohlobo lwe-SETit: Luhlobo lochwethezo olunemihombiso emininzi, engacetyiswayo ukuba isebenzise oonobumba abakhulu kuphela.
Amaphupha eCaviar, nguLauren ThompsonUluhlu olubanzi lweesimboli. Sinazo zonke iisimboli eziyimfuneko ukubhala iSpanish esifanelekileyo.
UJosefin Sans, nguTypemade: Siya kulahleka uphawu lwe-euro. Olu lusapho olukhulu kakhulu lohlobo lohlobo, oluqulathe umahluko olishumi (ukusuka banciphe kude kube ngesibindi).
Shicilela ngokucacileyo, ngeeFonti zeBlue Vinyl: Olu sapho luqulathe iifonti ezintathu, ezihlala zihleli, zinesibindi kwaye zenziwe ideshi (ezenziwe ngamachaphaza). Ubonakaliswe kukuphakama okuphezulu kunye nokunyuka okwaziwayo.
UNixie One, nguJovanny LemonadI-slab serif typeface efanelekileyo kwimibhalo emide. Icocekile kakhulu kwaye iyafundeka, ndiyayithanda.
Ukukhanya kokuKhanya: Uhlobo losapho oluqulathe uhlobo olune-3 lokwahluka okhethekileyo. Ukongeza kuhlobo oluqhelekileyo (ukukhanya), siya kuyifumana i-unicase (engohlukanisi kubude phakathi koonobumba abakhulu nabancinci) kunye nokuKhanya kweStencil (evelisa kwakhona isiphumo setemplate).
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iifonti eziSimahla ezi-5 (VI)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zasimahla zeWebhu eziyi-8
UBruno Wagner okanye indlela yokuzoba oothixokazi
Isikhokelo kwiRAW yaBasaqalayo